warkii.com » Saddex Ciyaartoy Oo Ka Tirsan Liverpool Oo Sharciga EPL U Diidayo In La Siiyo Biladda Hanashada Horyaalka
Saddex Ciyaartoy Oo Ka Tirsan Liverpool Oo Sharciga EPL U Diidayo In La Siiyo Biladda Hanashada Horyaalka
Tababaraha Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa war cusub kasoo saaray tirada ciyaartoyda Liverpool ee la guddoonsiin doono biladda hanashada horyaalka Premier League oo ay kooxdiisu ku guuleysatay markii ugu horreysay muddo soddon sannadood ah.
Liverpool oo usbuucii hore loo go’aamiyey inay hanatay horyaalka markii ay Chelsea guul-darro u xambaarisay Chelsea, waxay hadda sugayaan kaliya inay jamaahiirta kusii madadaaliyaan kulamada ka hadhay dhamaadka xili ciyaareedka, isla markaana ay sugaan inta ay gaadhayso waqtiga maamulku gacanta ka saarayo koobka.
Sharciga horyaalka ayaa dhigaya in ciyaartoyda saftay shan kulan oo Premier League ah ama ka badan qoorta loo sudho biladda guusha, waxaana Reds gacanta laga saari doonaa 40 billadood oo ay ciyaartoyda iyo shaqaalaha tababarku heli doonaan.
Tirada ciyaartoyda Liverpool ee damaanadda u haysta inay helaan biladdan ayaa hadda ah 21 laacib, laakiin saddexda ciyaartoy ee da’da yar ee Harvey Elliot, Neco Williams iyo Crtis Jones oo aan buuxin shuruudda uu sharcigu dhigayo.
Saddexdan ciyaartoy ayaa u baahan inay ciyaaraan min saddex kulan inta aanu dhamaanin xili ciyaareedku si ay uga mid noqdaan ciyaaryahannada biladda la siinayo, waxaana taas xaqiijin karaya tababare Jugen Klopp oo ay tahay inuu ciyaarsiiyo kulamada u hadhay kooxdiisa.
Tababaraha reer Germany ayaa saddexdan laacib u ballan-qaaday inay heli doonaan abaal-marinta, taas oo ka dhigan inuu u buuxin doono shuruudda sharciga ee ka dhiman, waxaanu yidhi: “Wiilashani, waxay boqolkiiba 100 heli doonaan biladda. Aniga ayaa shaqsiyan usoo saaraya. Boqolkiiba boqolna way haystaan biladdayda.
“Way u qalmaan biladda, wayna heli doonaan. Haddii aanay Premier League ka helin, aniga ayaa siin doona.”